Malunga Nathi - Cheng Ye co.,ltd.
Molo, le yiChengYe Co., Ltd,, Ukuvelisa izixhobo zeCarbide ukusukela ngo-1999, ezinjengeentonga ze-carbide, i-carbide end mill, i-carbide inserts, i-carbide burrs, i-carbide drills, i-reamers, i-standard kunye ne-non-standard.
Zonke izixhobo ze-carbide zenziwe ngeyona nto ingcono kakhulu; Izixhobo ze-5-axics ze-CNC zomatshini kunye neerobhothi zisetyenziselwa ukuvelisa i-mill end, i-drill, i-reamers.etc.Unokuvavanya iisampulu ekuqaleni, i-MOQ 3pcs ye-standard, i-MOQ 5 iipcs ze-non-standard .Izixhobo ezingcono kakhulu ziya kucetyiswa kuwe, kodwa kufuneka siyazi imeko yakho yokusetyenziswa, ukusika iNsimbi okanye iAluminiyam.
Singakunika izixhobo ezithandwayo zecarbide ngobuninzi; ubuninzi obungakumbi, isaphulelo esikhulu; Siza kuthatha i-0.1% yazo zonke ii-odolo kwaye sinikele kumazwe ahlwempuzekileyo e-Afrika. Ngemathiriyeli ekrwada eyandayo ukusuka kwi-COVID-19, ngethemba lokuba unokuzama izixhobo zethu ze-carbide kungekudala. .
Nazi ezinye iingxelo ezivela kubathengisi bethu:
Kwakhona, wamkelekile ukutyelela umzi-mveliso wethu ngalo lonke ixesha, ibhiya, imbiza eshushu, i-massage ikulindile.
I-Cheng Ye Co., Ltd.
Phelisa Mill Cutter China Ball End Mill Carbide Burrs Ball Nose End Mills China End Mill China Milling Cutter